HFE Environmentally-friendly cleaner ho an'ny lantihy China Manufacturer
Description:Tolo-dalàna fanadiovana ny tontolo iainana,HFE mahavariana amin'ny lafiny tontolo iainana,Fitiavana momba ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny Screen Lens
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Famenoana ny vahaolana amin&#39;ny alàlan&#39;ny sary mihetsika > HFE Environmentally-friendly cleaner ho an&#39;ny lantihy
HFE Hydrofluoroether vahaolana momba ny tontolo iainana -solo manadio ny efijery an-tsary
Ny Hydrofluoroether HFE DETERGENT dia tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza, tsy - mahasosotra, dia tontolo iainana-namana vokatra, izay sady colorless sy odorless, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
Tolo-dalàna fanadiovana ny tontolo iainana HFE mahavariana amin'ny lafiny tontolo iainana Fitiavana momba ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny Screen Lens